SQL Server Fitaovana fanarenana. SQL Server Fanamboarana rindrambaiko. Fitaovana fanamboarana MDF.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,614)
Nahoana DataNumen SQL Recovery?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe momba ny vokatra fanarenana SQL. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen SQL Recovery manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen SQL Recovery mifoka ny fifaninanana
Mahomby fotsiny, izay midika hoe mahafinaritra. Misaotra betsaka, indrindra satria raha tsy izany dia tsy ho vitako ny nahazo ara-batana ireo rakitra nilaiko
Salama. Manandrana ny lozisinao aho hanamboarana angon-drakitra sql. Rehefa avy nihazakazaka ny fitaovanao aho dia afaka mahita ny antontam-baiko rehetra indray izao :)
CEO & mpanorina ny Hey Flyer
Vahaolana amin'ny fanarahana ny lesoka mahazatra sy ny olana ao SQL Server MDF File
xxx.mdf Tsy rakitra tahiry data voalohany
xxx.mdf Tsy lohan-drakitra rakitra azo antoka
Sql Server Fahadisoana I / O miorina amin'ny lozisialy mifototra amin'ny lozisialy: Checksum diso
Sql Server Fahadisoana I / O mifototra amin'ny lozisialy mifandraika: Pejy rovitra
Avereno jerena ao anaty angona ireo rakitsoratra na tabilao
Endri-javatra lehibe ao DataNumen SQL Recovery v6.0
Tohano hanarenana ny firafitra sy ny angon-drakitra eo amin'ireo latabatra.
Fanohanana hamerenana amin'ny laoniny ny karazana data rehetra, ao anatin'izany ny karazana XML.
Fanohanana hamerenana ny tsanganana tsy dia misy dikany.
Fanohanana hamerenana ireo rakitra voafafa.
Fanohanana hamerenana ireo fanondroana sy lakile voalohany.
Fanohanana hamerenana amin'ny laoniny ny fomba fijery, ny fikafika, ny lalàna ary ny tsy fetezana.
Fanohanana mba hamerenana amin'ny laoniny ny fomba fitehirizana, ny asan'ny skalar, ny asan'ny latabatra tsipika ary ny asan'ny latabatra marobe.
Fanohanana hamerenana sy hanafoanana ireo zavatra voafafa.
Fanohanana hamerenana ireo rakitra marobe, ao anatin'izany ny rakitra MDF sy ireo rakitra NDF mifandraika amin'izany.
Fanohanana ny angon-drakitra azo averina amin'ny rakitra MDF.
Fanohanana hamerenana ny angona MDF / NDF avy amin'ny rakitra VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) tsy simba na simba (*. Vmdk), fisie Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. Vhd), rakitra Acronis True Image (*. Tib), Norton Ghost fisie (*. gho, * .v2i), fisie Windows NTBackup (*.bkf), Fisie sary ISO (*. Iso) ary fisie sary Nero (*. Nrg).
Fanohanana mba ho sitrana SQL Server angona avy amin'ny temporary fisiefana.mdf fisie.
Tohano hamerenana ny fisie MDF sy NDF lehibe 16TB.
Mifangaro amin'ny akorandriaka Windows, hahafahanao manamboatra rakitra MDF miaraka amin'ny tabilao (tsindrio havanana) menio Windows Explorer mora foana.
mampiasa DataNumen SQL Recovery hamerina ny kolikoly SQL Server angona
Raha ny anao SQL Server Ny rakitra MDF dia simba na simba ary tsy azonao atao ny manokatra azy ireo ara-dalàna, azonao ampiasaina DataNumen SQL Recovery mba hijerena ireo rakitra MDF ary hamerenana angona betsaka avy amin'izy ireo araka izay tratra.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana ireo rakitra MDF simba na simba DataNumen SQL Recovery, azafady manakatona ireo rindranasa hafa mety manova ny rakitra MDF.
Safidio ny rakitra MDF simba na simba hanamboarana.
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny fisie MDF na tsindrio ilay
bokotra hahitana ny rakitra MDF hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Raha misy rakitra NDF iray na maromaro mifandraika amin'ilay rakitra MDF simba dia azonao atao koa ny manampy azy ireo:
Raha fantatrao ny endrik'ilay rakitra MDF simba, dia azonao atao ny mamaritra azy:
Raha tsy faritoinao ny endriny, dia avereno atao default, DataNumen SQL Recovery Hiezaka ny hamakafaka ny rakitra MDF loharano ary hamaritra ho azy ny endrika.
Default (nitranga in- DataNumen SQL Recovery dia hitahiry ny rakitra MDF raikitra ao anaty fisie vaovao antsoina hoe xxxx_fixed.mdf, izay xxxx no anaran'ny fisie MDF loharano. Ohatra, ho an'ny rakitra MDF loharano Damaged.mdf, ny anarana default ho an'ny fisie raikitra dia ho Damaged_fixed.mdf. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Aorian'ny fizotry ny fanarenana dia azonao atao start SQL Server Management Studio ary miditra amin'ny angon-drakitra voaverina.
bokotra, DataNumen SQL Recovery dia handefa "Connect to SQL Server"boaty fifampiresahana, toy ny etsy ambany:
Mila mametraka ny Anarana Server Server ary fanamarinana fa ny SQL Server ohatra amin'ny solosaina eo an-toerana na lavitra, avy eo tsindrio ny bokotra "OK". dia DataNumen SQL Recovery start scanning sy fanamboarana ny rakitra MDF loharano. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanarenana, raha afaka sitrana soa aman-tsara ny rakitra MDF dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny ianao start SQL Server Management Studio ary ampidiro ny angon-drakitra ao anaty tahiry MDF.
Tohano hahatadidy ny fikirana fifandraisana.
Fanohanana hamerenana ireo lakileny voalohany.
Fanohanana hamerenana ny fananana tsy azo nofoanana amin'ny tsanganana.
DataNumen SQL Recovery Navoaka tamin'ny 5.9 Mey 3 ny 2021
DataNumen SQL Recovery 5.4 dia navoaka tamin'ny 15 Desambra 2020
DataNumen SQL Recovery Navoaka tamin'ny 5.2 Novambra 2 ny 2020
DataNumen SQL Recovery Navoaka tamin'ny 5.1 Jolay 11 ny 2020
DataNumen SQL Recovery 5.0 dia navoaka tamin'ny 5 Jona 2020
Esory ireo zavatra tsy misy ilana azy.
DataNumen SQL Recovery Navoaka tamin'ny 4.5 aprily 25 ny 2020
DataNumen SQL Recovery 4.4 dia navoaka tamin'ny 9 martsa 2020
Tohano hamerenana ny angona XML.
DataNumen SQL Recovery 4.3 dia navoaka tamin'ny 31 Desambra 2019
DataNumen SQL Recovery Navoaka tamin'ny 4.2 septambra 8 ny 2019
DataNumen SQL Recovery Navoaka tamin'ny 4.1 aprily 11 ny 2019
DataNumen SQL Recovery 4.0 dia navoaka tamin'ny 8 Desambra 2018
DataNumen SQL Recovery 3.2 dia navoaka tamin'ny 10 Oktobra 2018
DataNumen SQL Recovery Navoaka tamin'ny 3.0 Aogositra 15 ny 2018
Hatsarao ny zava-bita amin'ny fanodinana angona goavambe.
Ahenao ny fanjifana fahatsiarovana amin'ny fanodinana angona goavambe.
DataNumen SQL Recovery 2.8 dia navoaka tamin'ny 6 martsa 2018
DataNumen SQL Recovery 2.7 dia navoaka tamin'ny 26 martsa 2017
DataNumen SQL Recovery Navoaka tamin'ny 2.6 feb 3 ny 2017
Fanohanana hanarenana lesoka tahiry bebe kokoa.
DataNumen SQL Recovery 2.5 dia navoaka tamin'ny 12 Febroary 2016
DataNumen SQL Recovery 2.4 dia navoaka tamin'ny 1 Oktobra 2014
DataNumen SQL Recovery 2.3 dia navoaka tamin'ny 12 Mey 2014
Fanohanana hamerenana ny angona MDF / NDF avy amin'ny rakitra VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) tsy simba na simba (* .vmdk), fisie Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (* .vhd), rakitra Acronis True Image (* .tib), Norton Ghost fisie (* .gho, * .v2i), fisie Windows NTBackup (*.bkf), Fisie sary ISO (* .iso) ary fisie sary Nero (* .nrg).
DataNumen SQL Recovery 2.2 dia navoaka tamin'ny 18 martsa 2014
DataNumen SQL Recovery 2.1 dia navoaka tamin'ny 9 Janoary 2014
DataNumen SQL Recovery 2.0 dia navoaka tamin'ny 7 Desambra 2013
DataNumen SQL Recovery 1.1 dia navoaka tamin'ny 3 Aogositra 2013
Fanohanana ny fisie rakitra amin'ny endrika MDF.
DataNumen SQL Recovery 1.0 dia navoaka tamin'ny 11 Mey 2013
Tohano hanarenana ireo karazana data rehetra, afa-tsy ny karazana XML.